Byte, chishandiso chemimhanzi mune yakachena iOS maitiro eApple | Linux Vakapindwa muropa
Iko hakuna mashoma mashandisirwo anowanikwa muLinux anotibvumidza isu kuti titeerere kumimhanzi, asi panogara paine nzvimbo yeimwezve. Dambudziko guru randinoona maererano nekushandisa mimhanzi nderekuti zvinonetsa kuti mumwe abatanidze zvese zvatinokumbira, ndosaka iri zano rakanaka kuyedza zvese zvatinogona kusvika iwe wawana sarudzo kwayo. Hongu Rhythmbox, Clementine, Lollypop, Cantata, Tauon kana iyo yauri kushandisa izvozvi haikugutsi, pamwe zvichadaro Byte.
Chii chiri kurova nezveBete ndechekuti, kunyangwe ivo vasingazvitaure pachena, zvinoita kunge a app yakagadzirirwa nemaitiro Apple angaite zvinhu. Kutanga neiyo icon iyo inonyanya kuve iTunes icon iyo isisipo mu macOS Catalina. Kana kese iko kuvhurwa, iko kunzwa kwekuti isu takatarisana neApple software hakuderere uye zvinoita sekunge isu takatarisana nedombo, rakashata zvishoma, zvinofanirwa kutaurwa, zveiyo iPhone Music app.
Byte, mutambi wemimhanzi mudiki weLinux
Pakati pemabasa akatanhamara ayo Byte anopa isu tine:
Chiedza uye nerima madingindira.
Mikana yekuwedzera anosvika zana zvinyorwa (nziyo) mu «Ichangobva kuwedzerwa».
Ronga neakaunzi, zita, nhamba yemitambo kana ichangowedzerwa.
Yepamberi multimedia ruzivo uye ruzivo ruzivo.
Boka playlists, maalbum, maartist, nziyo, nezvimwe.
Tsvaga, wedzera uye utambe internet maredhiyo.
Sarudzo dzekutamba dzainopa zvakare idiki: tamba kana misa rwiyo, kumberi kana kunonoka, zvakare kubva kune inotsvedza kana inotsvedza, isa zvisina kurongeka uye tinogona zvakare kumaka nziyo sevanoda. Kana isu tikapinda sarudzo, tinogona kusarudza dingindira pakati pechiedza (chena uye tsvuku) uye maviri erima (dema uye tsvuku kana dema uye girini). Izvo zvinotipawo mukana wekuti hazvimise kutamba kunyange tikapfiga iyo app uye kuti inotitumira isu zviziviso kana ichienda kurwiyo rutsva. Hazvibatanidze zvakaenzana, asi ichi chinyorwa chega kuti, kana tikatarisa kuti hachiwanikwe mune mamwe maapplication emimhanzi chero, zvinoita sekunge zvine basa kwandiri chete.
Byte ndizvo inowanikwa seFlatpak package en Flathub, saka kuti tiise iyo isu tichafanirwa gonesa rutsigiro. Zvinoda kuziva kuti muUbuntu Software zvese zvinoonekwa muSpanish, asi ini handina kuona mukana iwoyo muUbuntu 19.10 Eoan Ermine. Iwe unozopa Byte mukana kana kuti watove unofara nemumhanzi wako app?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Multimedia » Byte, chishandiso chemimhanzi mune yakasarudzika iOS maitiro eApple
Alan M akadaro
Iyo xdxd icon yatove yakagadziridzwa.
Pindura kuna Alain M
Microsoft naWarner Bros vakakwanisa kuchengeta iyo yekutanga Superman bhaisikopo pane regirazi disc